Saameyn noocee ah ayuu isbeddelka guddoonka golaha shacabka ku yeelan kara howlaha baarlamaanka? – Kalfadhi
May 21, 2018 May 21, 2018 Kalfadhi
Golaha shacabka Soomaaliya ayaa dhawaan doortay Guddoomiye cusub Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyagoo dhinaca kale waayay Guddoomiye Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari ) oo muddo soo maamulaayay aqalka Golaha shacabka kaa oo 12kii bishii April ka hor shaaciyay istiqaaladiisa mudanayaasha Golaha shacabka.
Golaha ayaa shaqadiisa waxa ay tahay sharci dejin taas oo u dhub dhaxaad u ah maamulka guud ee dalka gaar ahaan hay’adaha federaalka Soomaaliya.
Saameyn noocee ah ayuu isbadalkan ku yeelan karaa howlaha Baarlamaanka ee la xiriira sharci dejinta iyo metalaada shacabka?
Aynu is bar bardhig kusamayno dhinaca waxbarashada ee labada Guddoomiye.
Guddoomiy Jawaari: waxa uu sanadku markuu ahaa 1982 ka qalan jabiyey kulliyadda Qaanuunka ee Jaamacadii Ummadda Soomaaliyeed.
Guddoomiye Mursal: Sanadkii 2014 Jaamacadda Culuum iyo Tecknolojiyada ee Sanca, ayuu ka diyaariyey cilmiga Arrimaha bulshada, Halka culuumta Xiriirka caalamiga iyo dilbloosiyada ka dhigtay Jaamacad ku taalo dalka Uganda, Sidoo kale waxa uu Shahaadooyin Diploma ah ka haystaa Teknoolajiyada Warfaafinta iyo Xiriirka Dadweynaha.
Dagaalkii iyo cadaadiskii uu Jawaari kala kulmay hay’adda fulinta ayaa dad badan waxa ay shaki ka muujinayaan awooda sare ee sharcidejinta dalka maadama xanta dadku ay isla dhex marayaan ay tahay in siyaasiga ay xukuumaddu wadatay uu soo baxay .
Maxamed Mursal Guddoomiyaha cusub ee Golaha shacabka ayaa ahaa wasiirkii Gaashandhiga ee Xukuumada Ra’iisull wasaare Khayre waxaana uu si aqlabiyad ah uu ugu guulaystay doorasho 10 musharax ay u hardameen sidii ay u hanan lahaayen Kursigii Jawaari iska casilay.
Abukaate Dahir Adan Cali ayaa su’aashaani ka eegaya laba dhinac oo kala ah mid wanaagsan iyo dhinac aan wanaagsanayn.
Abukaataha ayaa qaba in mar hadi uu Guddoomiyaha Baarlamaanka kasoo baxay dhinaca xukuumadda ay sahlanaan doonto wada shaqeeynta labada hay’adood ee fulinta iyo sharci dejinta tusaale in aan waqti badan lagalin meel marinta sharciyada ay soo ansixiyaan Golaha wasiirada.
Sidoo kale waxa uu Kalfadhi u sheegay inay fududen doonto shaqada labada hay’adood ayna yaraan doonaan isku dhacyada labada dhinac marka laga eego dhacdooyinkii laga soo gudbiyay ee dhexmari jiray Hay’addaha fulinta iyo sharci dejinta.
Dhinaca aan wanaagsaneyn:
Abukaate Daahir ayaa u arka in Golaha shacabka hadda uu galay jeebka xukuumadda Soomaaliya oo waxaa meesha ka baxay awooda golaha,iyo isla xisaabtankii ay ku sameen jireen golaha wasiirada.
“Waxaa jira cabsi aan qabo oo ku saabsan in golaha shacabka noqdo mid magac u yeel ah”sidaasi waxaa yiri Abukaate Daahir.
Sharci yaqaanada iyagoo dareensan arrintan haddana waxa ay wax lasoo dhaweeyo ku tilmaamayan madaxda dowladda sida ay wali ugu dhiiri galinayan guddoomiyihii hore ee golaha shacabka in wixii sharciyo ku saabsan ee dalkaan uu noqdo qof lagala tashado oo aan laga maarmeen khibradiisi dhinaca sharciga.
Cabdirisaaq Cumar waa ardey sharciga ka barta jaamacada SIMAD ee magaalada Muqdisho waxa uu yiri “Golaha waxaa yimid nin iska caadi ah oo bulshada kasoo baxay’waxa meesha ka baxay guddoomiye mararka qaar hab odayeesan uga felcelin jiray isqab qabsiga golaha shacabka iyo Xukuumadda waxa uu ahaa qof sharciga si wanaagsan loogu ixtiraamo bulshada ma garan karto sida ay noqon doonto awoodda Golaha”
Waqtiga la doortay oo kooban waxaan weli lasii saadaalin karin guddoomiye Mursal sida uu uga soo bixi doono inuu yareeyo isku dhacdayada labada hay’adood iyo meel marinta dhowr sharci oo golaha horyaala iyo sida xisaabtan loo marsiiyo golaha wasiirada.
W.D;Xasan Maxamed Aweys
July 17, 2021 Hassan Istiila
Dabayaaqadii bishii Juun, dowladda Galmudug waxay soo bandhigtay miisaaniyadda sanadka 2021 oo gaareysa US$ 27 milyan...
Haween musharraxiin ah oo dhammaantood ku cusub saaxada siyaasadda, ayaa shalay magaalada Muqdishu ku daah-furay midowga...